तिहार सकिएलगत्तै ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? – List Khabar
Home / आर्थिक / तिहार सकिएलगत्तै ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
admin3weeks ago आर्थिक Leaveacomment 61 Views
काठमाडौं – आज (सोमबार) नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार तोलामा ९६ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य बढेर तोलामा ९६ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो ।
यस्तै तेजावी सुन तोलामा ९६ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ ।
आज (सोमबार) चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । आइतबार तोलामा १ हजार ३ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य बढेर १ हजार ३ सय २० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ काठमाडौं – टी-२० विश्वकप २०२१ मा भारत समूह चरणबाटै घर फर्किएको छ। उसले अब साेमबार अन्तिम खेलमो नामिबियाको सामना गर्दै छ। टी-२० कप्तानको रुपमा विराट कोहलीको यो अन्तिम खेल हुनेछ।
Previous भोलि कार्तिक २३ गते मंगलबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस् राशिफल!
Next कोरोनाबाट प्रभावित रामेछापका ४ हजार ९ सय अति विपन्न परिवारले ‘कोभिड राहत रकम’ पाउने
आज (बिहीबार) घट्यो कि बढ्यो सुनको भाउ ?
काठमाडौँ । आज साताको पाँचौ दिन अर्थात (बिहीबार) नेपाली बजारमा सुनको भाउ पुनः उकालो लागेको …